Abathengisi be-manicure set kanye ne-Factory - i-china manicure set Set Manufacturers
I-17 ku-1 isikhumba se-manicure kit yokulungisa i-manicure set
1. I-Nail Clippers Set eyakhiwe ngesitayela, isekela ama-wholesales amaningi.In Stock / Dispatch Fast
2.I-Professional Nail Clippers Set, hhayi enhle kuphela, kodwa futhi ne-practical.Yenziwe ngensimbi ephezulu engenasici, impahla enobungane besikhumba, elungele wonke umuntu.Ifaneleke kubasebenzi be-pedicure manicure.
3. Isethi yokusika imfashini eyenziwe ngezinto zekhwalithi ephezulu, ithuluzi le-Nail liyisitayela, liqinile futhi likhululekile ekuthintweni.
4. Le Kit Nail Clippers Kit kufaka phakathi konke okudingayo ukuze uzenzele izinzipho nokuhamba ngezinyawo nsuku zonke.Amathuluzi aphelele, asebenziseka kalula.
5. Ilungele ukusetshenziswa kobungcweti noma ukusetshenziswa kwasekhaya, i-Beauty salon, i-manicure shop, i-pedicure shop, njll kanye nabantu kufaka phakathi i-novice, Yamukela ukwenza ngokwezifiso.
I-Ingaphandle eyenziwe ngesikhumba esimnyama se-PU lesikhumba ibukeka ikhetheke kakhulu futhi igcwele imfihlakalo.
I-7.Yenziwe ngensimbi esezingeni eliphakeme, vumela inzalo ephephile, Vimbela ukugqwala futhi unciphise ubungozi bokutheleleka.
I-8.MUTIL-FUNCTIONAL: Ukuzilolonga, ukwenza i-pedicure, i-Anti-Acne, ukukhipha amafutha, ukwakheka kwamashiya.
9. Kulula ukuphatha ukuthwala ekhaya.
15pcs Professional Manicure Set Pedicure nail Kit Engagqwali Izinyawo Ukunakekelwa Ithuluzi Setha
* Okuphezulu Kwekhwalithi Ephathekayo: Amafayela wethu wezipikili enziwe ngezinto ezithuthukisiwe ze-emery, enobungani bemvelo,
ikunikeza isipikili esikahle sokwenza isipiliyoni.
* Umklamo we-Ultra-thin: Lawa mafayili we-nail engasindi kulula futhi kulula ukuwasebenzisa. Vele usebenzise ingcindezi elula futhi ungabona imiphumela ngokushesha, kepha ngeke igobeke!
* Amabhodi we-Emery anezinhlangothi ezimbili: Lawa ma-buffers wezipikili alungele izinzipho, izinzwani, izinzipho zemvelo, izipikili ze-acrylic, amanga
izinzipho njalonjalo ngamabhodi we-emery anezinhlangothi ezimbili.
* Ngokuphelele kuma-Salon Nasekhaya: Lawa mafayili wekhwalithi yobungcweti akunikeza isisombululo esihle sokugcina izinzipho zakho ezinhle ze-acrylic, zemvelo nezamanga. Ungaba nama-salon ochwepheshe nobuciko be-DIY nail ekhaya.
IZLA 7 in 1 Insimbi Engagqwali Manicure Set Set Manicure & Pedicure Kits Professional Nail Clippers Kit Pedicure Care Tools for Travel or Home
IMISEBENZI EMININGI 7 KWI-1 KIT YOKUZILUNGISELA: Isethi yokusebenza kwe-manicure igxile kuzinzipho zokusika, ithuluzi ngalinye lenziwe ngokuningiliziwe futhi lingahlangabezana nazo zonke izinhlobo zezidingo zokunakekelwa empilweni yansuku zonke, eyodwa isethwe esandleni, ihlala ngokukhululeka.
Amathuluzi wekhwalithi ephezulu angenasici ayi-100%: Amathuluzi we-Manicure ne-Pedicure enziwe nge-Stainless Steel, Lesi sethi siqinile futhi sakhiwe ukuze sihlale, esivumela inzalo ephephile, sivimbele ukugqwala futhi sinciphise ubungozi bokutheleleka.
Ikesi Lesikhumba Eliphathekayo: Ngabe ufuna ukuba nesethi ye-manicure engathathi isikhala lapho usohambweni noma ekhaya? I-IZLA pedicure isethwe yakhelwe ngosayizi ongaphepheka, ungayifaka noma kuphi lapho ufuna khona, njengesikhwama semoto, imoto, imithwalo, ihhovisi nokunye, kuhle ngokuhamba noma ekhaya.
Isipho Esihamba Phambili: Amathuluzi eManicure eza nomklamo wokupakisha wobuhle. Leli cala lenziwe ngendwangu esezingeni eliphakeme nesikhumba se-PU, okuyisitayela nenhle futhi okwenzela isipho esihle.
Ukuvikelwa Kokulahleka: Ipotimende lesikhumba le-PU liyaphatheka futhi lingavulwa kalula ngokucindezela okukodwa kwenkinobho, okungavikela nakanjani, kugcine amathuluzi akho nokuwavimbela ekulahlekelweni.
I-Manicure Kit Pedicure Setha i-Nail Clipper Callus Remover Izingcezu eziyi-12
Kufaka i-toenail clipper, i-nail clipper, i-diagonal nail clipper, i-scissor enezinhloso eziningi, i-cuticle trimmer, i-pick pick, indlebe, i-push stick emaceleni omabili, i-eyebrow tweezer, ummese wokuxebula, ifayela le-nail, inaliti ye-blackhead kanye ne-loop remover, i-V-shaped push Namathela.
impahla: isikere, ifayili le-nail nipper nail, i-v shape pusher, i-tweezer, i-peeling ye-blackhead yenaliti ne-loop remover eyenziwe ngensimbi engagqwali, i-3pcs nail clipper ne-earpick eyenziwe nge-carbon steel, i-cuticle trimmer eyenziwe nge-zinc-aluminium alloy.
Ama-pcs ayi-12 we-manicure pedicure kit eza nekesi elihle futhi elinesitayela ukuvikela amathuluzi abukhali, kulula ukuvala noma ukuvula ngokuvalwa kwe-snap okuphephile.